जुआन जोस मिलिस, प्लैनेट अवार्ड (२०० 2007) को विजेता | वर्तमान साहित्य
जुआन जोस मिल: पुस्तकहरू
जुआन जोस मिलिज
करीव decades दशकको पेशाको साथ, स्पेनिश लेखक र पत्रकार जुआन जोस मिलस एक पवित्र लेखक हुन्। हाल यसमा it 35 भन्दा बढी प्रकाशनहरू छन्, उपन्यासहरू, कथाहरू, लेखहरू र रिपोर्टहरू सहित। भालेन्सियन आफ्नो चौथो पुस्तकको माध्यम बाट field० को दशकमा साहित्यको क्षेत्रमा उभिए। भिजेको कागज (1983). यो पुलिस कथन किशोर साहित्यको एक प्रकाशकको ​​अनुरोधमा लेखिएको थियो, र यसको प्रीमियर पछि यो एक ठूलो प्रतिक्रिया थियो।
यस उपन्यासको सफलता पछि मिल्सले पत्रकारितामा प्रवेश गरे जुन उनले आफ्नो मौलिक शैलीको साथ अभ्यास गरे। उनलाई दस पटक महत्त्वपूर्ण पुरस्कारका साथ पुरस्कृत गरिएको छ, दुबै साहित्यिक र पत्रकारिता। तिनीहरूको दुई डाक्टरेट सम्मानित कोसा, ट्यूरिन र ओभिडो विश्वविद्यालयहरू द्वारा सम्मानित।
1.3 पत्रकार अभ्यास
1.4 जुआन जोस मिलिसका उपन्यासहरू
2 जुआन जोस मिल्स द्वारा लिखित केहि पुस्तकहरूको सारांश
2.1 गीला कागज (१ 1983 XNUMX)
2.2 प्रागमा दुई महिला (२००२)
2.3 विश्व (२०० 2007)
2.4 पागल महिला (२०१ 2014)
2.5 समयमा जीवन (२०१))
जुआन जोस मिलिस गार्सिया भ्यालेन्सियामा जन्म भएको थियो (स्पेन) जनवरी on१, 1946। उहाँ ठूलो परिवारबाट आउनुहुन्छ, उहाँ नौ भाई-बहिनीमध्ये चौथो हुनुहुन्छ। उनका अभिभावक भिसेन्टे मिलस मोसी इन्भेन्टर र औद्योगिक टेक्नीशियन र सेन्डिडा गार्सिया थिए। उनले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू आफ्नो गृहनगरमा बिताए सन् १ 1.952 XNUMX२ मा उनी बसाइँ सरे उनको परिवार संग समृद्धि, को एक लोकप्रिय शहर मैड्रिड.
उनले रातमा अध्ययन गरे किनभने दिनको समयमा उनले बचत बैंकमा अस्थायी कामदारको रूपमा काम गरे। तीन बर्षको लागि दर्शन र पत्र अध्ययन गर्नुभयो - म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटिमा शुद्ध दर्शनशास्त्रको विशेषतामा, जुन उसले केहि समय पछि छोड्यो. प्रारम्भिक भित्र दशक '० ' उनी इबेरिया प्रेस अफिसमा भर्ना भए।
आफ्नो शुरुवातमा उनले कविता संग छेड़खानी गरे, यद्यपि अन्तमा उनले कथाको आकर्षणमा समर्पण गरे। १ 1975 XNUMX मा, उनले उपन्यास प्रकाशित गरे: सर्बेरस छाया हो; जुन सँगै उनले सोसोो पुरस्कार सोही वर्ष प्राप्त गरे र साहित्यिक आलोचकहरूबाट ठूलो मान्यता प्राप्त गरे। आउँदो छ वर्षमा उसले दुई कार्यहरू प्रस्तुत गर्‍यो: डुब्नेको दृश्य (1977) र खाली बगैचा (1981)।
१ 1983 XNUMX मा, उनले आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित गरे: भिजेको कागज, हजारौं पाठकहरु लाई आकर्षित गर्ने उपन्यास। त्यो सफलता पछि, पछिल्ला decades दशकहरूमा संग उसको साहित्यिक जीवनलाई सुदृढ बनाएको छ १ nar कथा कि उसलाई योग्य बनाएको छ महत्वपूर्ण पुरस्कार। यी पदहरू मध्ये, निम्नलिखित बाहिर खडा: प्रागमा दुई महिला (२००२), जसको साथ उनले प्राइमेरा अवार्ड जितेका थिए; Y संसार (२००)), ग्रह (२०० 2007) र राष्ट्रिय कथा (२०० 2007) पुरस्कारका विजेता।
प्रारम्भिक भित्र 90 ० को दशकमा उनले पत्रकारिताको काम सुरु गरे देश र अन्य स्पेनिश मिडिया। यो लेखन द्वारा विशेषता गरिएको छ स्तम्भहरू "लेख" भनिन्छ, जसमा उसले साधारण घटनालाई रमाईलो कुरामा परिवर्तन गर्दछ। यस क्षेत्रमा उनलाई धेरै अवसरमा सम्मानित गरिएको छ, उनका पुरस्कारहरू मध्ये: मारियानो डे काभिया जर्नलिज्म (१ 1999 2009 XNUMX) र डन क्विजोट जर्नलिज्म (२००)) हो।
जुआन जोस मिलिसका उपन्यासहरू
सर्बेरस छाया हो (1975)
डुब्नेको दृश्य (1977)
खाली बगैचा (1981)
भिजेको कागज (1983)
मृत पत्र (1984)
तपाईंको नामको गडबडी (1987)
एकाकीपन यो थियो (1990)
घर फर्किनु (1990)
मूर्ख, मृत, हरामी र अदृश्य (1995)
वर्णमाला क्रममा (1998)
ओछ्यानमा नहेर्नुहोस् (1999)
प्रागमा दुई महिला (2002)
लौरा र जूलियो (2006)
के म साना मान्छे को बारे मा थाहा छ (2010)
पागल महिला (2014)
मेरो सत्य कथा (2017)
कसैलाई सुत्न नदेऊ (2018)
जीवन कहिलेकाँही (2019)
जुआन जोस मिल्स द्वारा लिखित केहि पुस्तकहरूको सारांश
पत्रकार मानोलो उरबिनाले "आत्महत्या" को अनुसन्धान शुरू गरे उसको पुरानो साथी लुइस मैरी, देखि उसलाई हत्या गरिएको थियो भन्ने शंका लाग्छ। यस यात्राभरि, उनले एकै साथ एउटा उपन्यासमा के भयो दस्तावेजहरू गरे, यदि उसलाई केहि भयो भने ब्याकअपको रूपमा। मृतकको जीवनमा दुई महत्वपूर्ण महिला टेरिसा र क्यारोलिना अनुसन्धानको क्रममा मनोलोलाई सहयोग पुर्‍याउने छन्।
सुरागको खोजीमा, टेरेसा फेला पर्‍यो पैसा र सम्झौता कागजातहरूका साथ ब्रीफकेस, जसमा फार्मासिस्ट समावेश छ। जब इन्स्पेक्टर कर्डेनासले प्रक्रियाको लगाम लिन्छन् सबै कुरा बिग्रिन थाल्छ। यस अफिसरले आश्चर्यकर्म गर्ने र अविश्वसनीय परिणामका साथ आँखा झिम्काएर केसलाई सुल्झाउने आधारभूत अंशहरू पत्ता लगाउनेछ।
भिजेको कागज (को किताब ...
En la उन्नत कसैको जसले आफ्नो जीवनी लेख्छन्, Luz Acaso एउटा समाचार पत्र लिनुहोस् र मा बम्पहरू को नाम एक प्रसिद्ध युवा लेखक। पहिले नै निर्णय गरीएको छ - ईन्ग्मासले पूर्ण - उनी यस्तो अनुरोध गर्न लेखकको साहित्यिक कार्यालयमा जान्छन्; उसले यसलाई लिन्छ र यसलाई स्वीकार्छ। एल्वारो अब्रिल (लेखक) आफ्नो पक्षमा आफैलाई आन्तरिक स struggle्घर्षमा डुबेका छन्: उनको पहिलो पुस्तकले उनलाई सफल बनायो भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि, धर्मपुत्र बनेको बारम्बारिक शंकाले उसलाई खुशी पार्न सकेन।
अन्तर्वार्ता मा एल् लुरोसँग डे लुज, उनी आफ्नो जीवनका तथ्यहरू बताउँछिन् त्यो देखिन्छ बाट लिइएको काल्पनिक चलचित्रका दृश्यहरू। जब दुई बीचको भेलाहरू हुँदै जान्छ, नेक्सस स्थिर संयोगको कारण बढ्छ। यसका साथै धेरै पात्रहरू यस कथानकमा समावेश हुन्छन्, तीमध्ये लुजको साथी मारिया जोसे जो एलवारोको प्रस्ताव राख्छन्।
पृष्ठहरू टर्निंगको साथ रहस्य, सत्य, छलकपट र धेरै कल्पना को एक समूह को लागी शुरू हुन ... यी तत्वहरूले प्लाटको बखत सबैलाई घेरेका छन्, जुन एक शोषक विकासमा लिन्छ अन्त्य नभएसम्म कि कसैले सायद आशा गर्दैन।
प्रागमा दुई महिलाहरू ...
एक केटा-जुआन जोसेले आफ्नो बाल्यकाल उसको दृष्टिकोणबाट सुनाए; उनको जन्म, Valencia मा पहिलो वर्ष र आफ्नो गृहनगर बाट म्याड्रिड शहर को लागी हस्तान्तरण। युद्धपछिको वातावरणमा उनका अनुभवहरू वर्णन गर्दछ, सुख र शोक संग डटेड, एक चिसो मौसम मा, नयाँ मित्रता र अप्रिय प्रेम संग। एक वास्तविकता जसमा उनी बानी हुनु पर्ने थियो राम्रो वा नराम्रो।
जब ऊ हुर्कन्छ, ऊ आफैंले मान्छे गुमाएको कसरी वर्णन गर्दछ र ती खैरो क्षणहरू सहन कठिन छ प्रियजनहरूको अनुपस्थितिले अनुकूलन निर्धारण गर्दछ पहिले नै किशोरको, जो उत्तम तरिकामा बाँच्न प्रयास गर्दछ। कथा यसको अस्तित्वका धेरै क्षणहरू द्वारा चिह्नित गरिएको छ - कसरी बच्चा बिस्तारै मान्छे बन्छ - वास्तविकता र कल्पनाको बीचमा।
जुलिया माछा मार्ने व्यक्ति हो जसले भाषाविज्ञानको बारेमा बढि जान्ने निर्णय गर्दछ, यो किनभने que उनी आफ्नो मालिक रोबर्टोसँग व्याकुल छिन्, जो एक फिलोलजिस्ट हुन्। ऊ आफैले सिकाएको हो, र यस प्रक्रियामा चरित्रहरू दिमागमा आउँछन् जससँग उसले समाधानको खोजीमा संवाद गर्दछ। माछा मार्ने काम गर्ने बाहेक, जुलियाले इमरिताको हेरचाह गर्छिन्, जो मृत्युको लागि अस्थायी बिरामी छन्।
एक दिन जब युवती इमेरिटा गइरहेकी थिइन्, मिल्स, एक जना पत्रकारले भ्रमण गरेका छन् जो इउथेनेसिया रिपोर्ट गर्न चाहान्छन्। अधिक विस्तृत रूपमा जुलियालाई चिन्ने बित्तिकै, उसले तुरुन्तै आफ्नो कथा लेख्ने प्रस्ताव राख्यो। सामान्यतया, मानिस एक रचनात्मक ब्लक को माध्यम बाट जा थियो। कठोर तरिकामा, सबै परिवर्तन हुन्छ ...: Emerita एक ईन्ग्मा अनावरण गर्दछ, र रिपोर्टर आश्चर्यचकित छ।
पागल महिला (उपन्यास)
जुआन्जो मिल्स जो लेखक हुन् उनको डायरी प्रविष्टिहरूको आधारमा आफ्नो जीवनको १ 194 XNUMX हप्ताहरू पुन: याद गर्दछ। त्यहाँ उसले आफ्नो व्यक्तित्व उदा ;्ग पार्छ, केहि अन्तरदृष्टि, हँसिलो, व्यंग्यात्मक र सोबर; एक सीमित क्षेत्रमा विवेक र pranoia बीच। त्यस्तै, उसले केहि अनुभवहरू वर्णन गर्दछ, जस्तै उसको मनोविश्लेषकको भ्रमण, उसको रुचि, उपचार र अवलोकनकर्ताको एक्लो दैनिक जीवन।
प्रत्येक सानो अध्यायले अनौंठो र चाखलाग्दो परिस्थितिहरूको साथ विशिष्ट क्षणहरू वर्णन गर्दछ। Se तिनीहरूले साधारण परिदृश्यहरू प्रस्तुत गर्दछ: जस्तै तपाईंको साहित्यिक ट्राफिक जाम, घरेलु समस्याहरू, वा तपाईंको कार ब्रेकडाउनहरू। यो एक काल्पनिक कथा हो जुन सामान्य व्यक्तिको बारेमा केही वास्तविकता हुन सक्छ वा हुन सक्दैन, तर केही हदसम्म व्याकुल र असाधारण दृश्यको साथ।
जीवन कहिलेकाँही ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » जुआन जोस मिल: पुस्तकहरू